नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कलाकार निर्मल शर्माले अहिले सम्मकै फरक बिषयमा एउटा चलचित्र "चकलेट" निर्माण एबम निर्देशन गर्दै !
कलाकार निर्मल शर्माले अहिले सम्मकै फरक बिषयमा एउटा चलचित्र "चकलेट" निर्माण एबम निर्देशन गर्दै !
नेपालका स्तरिय कलाकार मध्येका एक कलाकार निर्मल शर्माले अहिले सम्मकै फरक बिषय र बालबालिकाका बिषयमा एउटा चलचित्र "चकलेट" निर्माण एबम निर्देशन गरिरहेका छन । दीपक राज गिरी र दीपा श्री निरौलाका घनिस्ठ र तितो सत्य देखी छ एकान छ सम्मका सारथी शर्मा को यो चलचित्र हालसम्मकै एउटा अलग चलचित्र हुने निर्मल ले नेपाल मदर डट कम लाई बताए । धमाधम छायाँकन भैरहेको उक्त चलचित्रलाई
निर्मल ले स्तरिय बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन । यो चलचित्र निर्मल ले भने झै स्तरिय बन्न सकोस दर्शकको मन छुन सकोस नेपाल मदर को शुभकामना । चलचित्रको छायाँकनका केही तस्बिरहरु तल प्रस्तुत छन :